Xeerarka Muusikada ee Roblox - Tilmaamaha raadinta Aqoonsiyada Heesaha (Dec. 2020) - Sida Loo
Xeerarka Muusikada ee Roblox - Tilmaamaha raadinta Aqoonsiyada Heesaha (Dec. 2020)
Xeerarka miyuusigga ee Roblox ayaa ah habka ugu fudud ee loogu dari karo muusikada ciyaartaada adigoo ku raaxeysanaya cinwaanka cajiibka ah. Waa bilaash in la ciyaaro, kulligeenna waxoogaa baashaal ah ayaynu ku raaxeysaneynaa ciyaarta xiisaha leh. Muusik kasta, mid duug ah ama cusub, mid dhaqameed ama mid indie ah ayaa looga shaqeyn karaa Roblox. Waxa kaliya ee ay u baahan tahay waa in codka laga diiwaangeliyo keydka muusikada Roblox.
Horumarinta cayaaraha ee Roblox waxay adeegsadaan maqal iyo muusig si ay uga dhigaan ciyaartooda mid soo jiidasho leh. Waxay ku sameeyaan taas oo ay ku darayaan codka sida muusikada asalka ah. Way fududahay in lagu daro lambarrada muusigga ciyaartaada. Tilmaamahan, waxaan ku soo bandhigi doonnaa wax kasta oo la xiriira Xeerarka Muusikada ee Roblox.
Maqaallo badan oo la xiriira Roblox:
Xeerarka Promo Roblox - Liiska Shaqada
Sidee loo Helaa Xeerarka Muusikada ee Roblox?
Tag koontadaada Roblox oo ku qor booska sanduuqa raadinta. Waxaad ka heli doontaa talooyin kala duwan hoosta, guji 'Library' soo jeedinta. Kadib markaad gasho bogga Maktabadda, dhagsii xulashada maqalka. Markaad dooratid ikhtiyaarka Audio, waxay u weecineysaa bogga muusikada oo aad ka heli karto tiro heeso ah oo hoose. Oo haddii aad rabto inaad ka hesho gabal gaar ah oo ka mid ah meesha quduuska ah ee faylasha muusikada, waxaad ka heli doontaa idka dusha sare ee bogga qaybta URL.
Lambarka 9-ka ah (10-lambar mararka qaarkood) inta udhaxeysa labada jeex ee horay u socda waa koodhka maqalka gaarka ah. Waxaad ka baari kartaa koodhka muusikada ee heesaha aad rabto google. Waxaa jira degello si gaar ah loogu talagalay koodhadhka muusigga ee Roblox. Raadi koodhadh aad ku jeceshahay oo nuqul ka samee lambarka 9-ka lambar ah (ama 10 lambar lambar muusig ah), ka dibna ku dheji inta u dhexeysa labada is-gooyo ee horay u socda. Haatan waxaad la joogtaa dariiqaaga gaarka ah ee masraxa ciyaarta Roblox.
Waa kuwan xeerarka Roblox ee qaar ka mid ah heesaha caanka ah,
Xusuustii Maroon 5 - 4250558781.
Ilmaha waxaa qoray Justin Bieber - 215816785.
Qorshaha Ilaah ee Drake - 1479998427.
Si tartiib ah - 1341533521.
Taasi waa waxa aan ka helay Bruno Mars - 887315453.
Havana waxaa qoray Camilla Cabello - 1464709380.
Lousy Guy waxaa qoray Billie Eilish - 3015811673.
Waxaan kugu Dhagxin doonnaa Boqorad - 140777409.
Wadada Old Town ee Lil Nas X - 2931174010.
Dilka maskaxdayda - 22551926665
Si tartiib ah - 1341533521
Onkod - 755156652
Mu'min - 650763116
Xagaaga - 60685337
I fiiri - 425832596
Waan ka helay - 2360932493
Madoow - 2157761406
Jacayl - 2183613911
Hubka hareerahaaga - 2201082543
Jabtay - 43591163
Barakooyinka - 455514322
Hoos u dhaca - 2375621580
Sidee U Isticmaali Kartaa Aqoonsiyada Muusikada ee Roblox?
Marka hore, waa inaad haysataa boombood. Launch ciyaartaada Roblox oo gal madal.
Dheeraad ah, guji boombox-kaaga oo ku qor aqoonsiga ama koodhka heesta aad dooratay. Halkaas ayaad ku haysataa, muusikadaadu waxay ku dhex socotaa boombox.
Waa kuwan qaabab labadaba loo soo dejiyo oo loo helo feyl maqal ah oo ku saabsan 'Roblox'.
Qaab u soo dir faylka maqalka:
Faylka maqalka waxaa lagu soo dhejin karaa fayl mp3 ah ama faylka OGG, noocyada faylasha ee aan ka ahayn labadan waxay yeelan karaan halista feylku aanu si sax ah u soconayn.
Habka loo soo rogo feyl maqal ah:
Dhammaanteen waxaan dooneynaa inaan ku raaxeysto muusikada gaarka ah, waxaana si dhakhso leh loogu samayn karaa bogga internetka. Roblox wuxuu leeyahay qodob ku darista muusikada kugu habboon dhadhankaaga. Waxaad si fudud ugu gudbin kartaa waxyaabaha adoo adeegsanaya qaabab kala duwan. Waa kuwan tallaabooyinka aad uga faa'iideysan karto habka tafatirkaaga maqalka. Soo rarida waxaa lagu sameeyaa bogga Roblox, roblox.com.
Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo tagaya biraawsarkaaga oo gujinaya tan isku xidhka . Waxay ku geyn doontaa bogga guriga Roblox. Halkan waxaad ka gali kartaa koontadaada Roblox. Way fududahay in lagu bilaabo ka shaqeynta saxiixa Roblox.
Mar alla markii aad saxiixdo waxaa ku soo dhaweynaya shaashadda soo galitaanka caadiga ah ee koontada 'Roblox'. Guji astaanta abuurka dusha sare ee bogga. Waxay ku geyn doontaa maktabadda makhluuqaadka aad ku leedahay bogga internetka. Halkan waa inaad doorataa ikhtiyaarka codka.
Markaad doorato ikhtiyaarka codka, way fududahay inaad kudariso faylkaaga miyuusiga koontada. Intaa ka dib, caleenta oo xulo feyl maqal ah. Rarinta waxay qaadan doontaa oo keliya dhowr ilbiriqsi iyadoo kuxiran xawaaraha internetka.
Markaad doorato feylka codka, guji Qiyaasta Qiimaha si aad u aragto Qiimaha Robux (lacagta ciyaarta) codkaaga aad dooratay. Xaqiijintaada kadib, dhammaystir iibsigaaga. Qiimaha Robux badanaa waa mid hooseeya marka la fiiriyo cabirka faylkaaga maqalka ah.
Marka codka la doorto, waad bixin kartaa ka dibna ku bilaabi kartaa adeegsiga faylkaaga maqalka. Way fududahay in la sameeyo taas haddii aad Robux ku leedahay koontadaada. Isticmaalayaasha ayaa ku dari kara lacagta Robux adoo ku bixinaya madal sidoo kale.Codka waa inuu ka yaryahay toddobo daqiiqo, taas oo ka yar 20 MB, taas oo la fahmi doono. Maqalka lama degdegi karo, lama gaabin karo, lamana beddeli karo.
20 ciyaarta Robux loogu talagalay 0 - 10 ilbidhiqsi.
35 ciyaarta dhexdeeda ah Robux 10-30 ilbidhiqsi.
70 gudaha ciyaarta Robux 30 ilbidhiqsi - 2 daqiiqo.
350 kulan-Robux ah 2 - 7 daqiiqo.
Qiimaha maqalka waa macquul, oo waxaad sameyn kartaa wax iibsasho macquul ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga. Waa wax daruuri u ah kuwa doonaya inay heesahoodu yeeshaan oo ku shaqeeyaan qalabkooda.
Isticmaalayaasha waxay leeyihiin xorriyad ay ugu qaabeeyaan codka hadba baahidooda. Aad ayey faa'iido ugu leedahay kuwa doonaya inay wax ka beddelaan dhowr nooc oo muusiko ah. Waxaan kugula talineynaa tan isticmaaleyaasha doonaya inay waqti fiican qaataan inta ay ciyaarayaan ciyaarta. Waxay ku habboon tahay hubinta muusikada cusub iyo tifaftirka kuwa jira si waafaqsan baahiyahaaga. Halkan waxaa ku yaal tilmaamaha lagu hagaajinayo lambarradaada Muusikada ee Roblox.
Markaad geliso feylkaaga maqalka ah, waxaad sidoo kale ku habeyn kartaa muusikadaada bogga qaabeynta. Tag xulashada dejinta ee ku taal dhinaca midig ee faylka la soo rogay ee ku jira qaybta 'Audio' ee nidaamka Abuuristaada.
Bogga qaabeynta wuxuu leeyahay xulashooyin magac ah, sharraxaad, u rogo faallooyinka / dansiga, nooc, oo bilaash ka dhig.
Magaca -doorashadan si aad wax uga beddesho magaca faylkaaga maqalka ah.
Sharaxaad -ikhtiyaarkan ayaa soo koobaya faylkaaga maqalka ah.
Daar / shid faallooyinka -Habee in qaybta faalladaadu ay furan tahay iyo in kale.
Suugaan -u kala saar faylkaaga maqalka ah si ay dadka kale u helaan.
Samee bilaash -Xulo haddii feylku u bilaash u yahay dhammaan isticmaaleyaasha ama kaliya waad isticmaali kartaa.
Xeerarka Muusikada ee Roblox waa hab cajiib ah oo lagu hubiyo inaad helayso khibrado tayo leh. Ciyaartu waxay u baahan tahay xamaasad badan, waana lagama maarmaan in la helo heesaha saxda ah ee asalka ah. Tilmaamahan, waxaan si qoto dheer ugu dhex milmaynaa lambarrada muusikada ee kala duwan. Waad isku dayi kartaa inaad khibrad weyn u leedahay dhageysiga muusikada. Waxaan ku taxnaa lambarrada muusikada ee Roblox qaar ka mid ah heesaha ugu caansan. Maktabada Roblox aad ayey kuugu weyn tahay inaad tijaabiso xulashooyin kala duwan. Baadh fursadaha oo soo hel waayo-aragnimadaada muusikada ugu fiican ciyaarta.
Hagaaji Xeerka Cilad Roblox 267
Luke Bryan Net Worth - Da'da, Xirfadda, Nolosha Hore & Wax ka badan!
Indhaha Tammy Faye: Filimka Documentary ee Michael Showalter
sida muusikada looga beddelo youtube -ka loona beddelo mp3
https //www.netflix.com galitaan
lambarrada kaarka hadiyadda ee xbox oo bilaash ah 2020
sideen ku heli karaa koodh -ka -hawlgalinta hulu
sida loo helo show show on roku